ဦးဆောင်သူတွေက သမားရိုးကျ မတွေးသင့်ပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဦးဆောင်သူတွေက သမားရိုးကျ မတွေးသင့်ပါ။
ဦးဆောင်သူတွေက သမားရိုးကျ မတွေးသင့်ပါ။
Posted by black chaw on Feb 28, 2012 in Creative Writing, Myanma News, News, Opinions & Discussion | 39 comments
၀န်ထမ်းလစာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ။
မနေ့က ကျွန်တော် တင်ခဲ့တဲ့ အိပ်ချင်ပြေ ပို့စ် မှာ အနုပညာလောက သတင်းတွေကိုသာ အဓိကထားတင်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် ပို့စ် ရဲ့ နောက်ဆုံး သတင်းကတော့ ပေါ့ပ် သတင်းတစ်ပုဒ်မဟုတ်ပဲ ၀န်ထမ်းများလစာတိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံတော်လူကြီးမင်း ရဲ့ တွန်းအားပေးထားတာလေးဟာ ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လားဆိုတာ ဖေါ်ပြဆွေးနွေးထားခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလို့ မြင်တာကြောင့် ဟိုက်လိုက်လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။
တိုက်ဆိုင်တာက ဒီနေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းဂျာနယ်ထဲမှာ အဲဒီအကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကြီးပါလာတာပါပဲ ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းများ လစာတိုးတယ် ဆိုတာ အင်မတန်လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စမျိုးပါ။ ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ပေးရတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ နိုင်ငံတော်မှာသာ တာဝန်ရှိနေတာပါ။
သို့သော် လစာတိုးလိုက်တဲ့အတွက် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာမလဲ။ ကောင်းလာမှာတွေ ဆိုးလာမှာတွေကို စံနစ်တကျ တွက်ချက်ကြည့်ပြီးပါပြီလား။
ဆိုလိုတာက အဆိုပြုချက်တစ်ခုကို ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ် မတွက်တော့ပဲ ဟီးရိုး လုပ်သလို လုပ်နေရင် နစ်နာမှာက ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုပါ။ ဟီးရိုးဆန်ဆန် အဆိုပြုချက်တွေ ဟီးရိုးဆန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုကြတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေ အနေနဲ့ Vision မှန်မှန်နဲ့ လက်ခံသင့် မခံသင့် ဆုံးဖြတ်ကြစေချင်ပါတယ်။
မီဒီယာအနေနဲ့ကတော့ ဒီနေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းဂျာနယ်မှာ ဒီအကြောင်းကို ပညာရှင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးထားတာလေးတွေ ထည့်ပေးထားပါပြီ။ တာဝန်ကျေသော ရန်ကုန်တိုင်း ဂျာနယ်ပါခင်ဗျာ။
ဒီလို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက် ဆွေးနွေးသင့် ဆွေးနွေးထိုက်တဲ့ ကိစ္စမျိုးကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဖေါ်ထုတ်ရေးသားဆွေးနွေးပေးတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဂျာနယ် ရဲ့ အားထုတ်မှုကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ကျွန်တော်က လေးလေးစားစား ပြောပါရစေခင်ဗျာ။
ဒီနေ့မှထုတ်တဲ့ဂျာနယ်က ဆောင်းပါးဆိုတော့ အကုန်လုံးကို မဖေါ်ပြတော့ပါဘူး။
ကုန်ဈေးနှုန်းကြောင့် ဘဲစားဘဲချေ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဆွေးနွေးပေးထားတဲ့ ပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကလေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။
လစာတိုးမြှင့်ပြီဆိုသည့် သတင်းကလေး မကြားလိုက်နှင့်၊ ကုန်ဈေးနှုန်းက တက်ပြီး ဖြစ်နှင့်နေပြီဆိုသည့် အဖြစ်များကြောင့် လစာတိုးပေးတိုင်းလည်း ၀န်ထမ်းများ၏ ဘ၀ ထူး၍ ချောင်လည်မလာပဲ ဘဲစားဘဲချေဖြစ်ကာ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပင်ဖြစ်နေကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်တွင် လစာတိုးမြှင့်ပေးသည့် အကြိမ်ရေတော်တော်များများ၏ အတွေ့အကြုံက သက်သေခံနေပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ လစာတိုးမြှင့်ပေးရန် လုံလောက်သည့် ဘတ်ဂျက် အပိုငွေ မရှိဘဲနှင့် ချေးယူခြင်း၊ အခွန်တိုးကောက်ခြင်း၊ ငွေစက္ကူရိုက်နှိပ်ခြင်းတို့ဖြင့်သာ လုပ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လစာတိုးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာလျက်ရှိသည့် ပညာရှင်ဦးလှမောင်က “ ဘယ်က ငွေရမှာလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောပြမယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်ကစပြီး ၀န်ထမ်းတွေကို လခ တိုးပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ အကြိမ်တိုးပေးတာက ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက်ထက် လစာလေးကြိမ်လောက်တိုးပေးတဲ့ အထဲမှာ ပမာဏအများဆုံး တိုးပေးတဲ့ အကြိမ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်သိရတဲ့ ကိန်းဂဏန်းအရတော့ တပ်မတော်အပါအ၀င် ၀န်ထမ်းပေါင်း ၂ သန်းလောက် ရှိတယ်။ လူဦးရေ ၂ သန်းကို ပျှမ်းမျှ တစ်ယောက်ကို သုံးသောင်းတိုးပေး။ တစ်လကို ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ။ ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၆၀ လောက်ဖြစ်သွားမယ်။ တစ်နှစ်ကို ဘီလီယံ ၇၂၀ လောက်လိုမယ်။ ဒီ့အတွက် ဘယ်က ငွေရမလဲ။ ဘယ်ကငွေရလဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရောင်းလို့ရတဲ့ ဒေါ်လာ ၂.၇ ဘီလီယံက တစ်ဒေါ်လာ ခြောက်ကျပ်ဈေးနဲ့ ဆိုရင် ကျပ်ငွေ ၁၃ ဘီလီယံ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ နေပြည်တော်စီမံကိန်းတွေ စတင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် ဓါတ်ငွေ့ကရတဲ့ငွေက အဲဒီစီမံကိန်းအတွက် သုံးနေရတယ်။ ဒီတော့ လစာတိုးတဲ့ ငွေတွေက ဘယ်ကရသလဲဆိုတော့ ဒါက Assumption (တွက်ဆခြင်း) လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဧပြီလစာတိုးပြီးနောက် အောက်တိုဘာလမှာ ဓါတ်ဆီတစ်ဂါလန်ကို ကျပ် တစ်ရာ့ရှစ်ဆယ်ကနေ ၁၅၀၀ ဆိုပြီး ၈.၃ဆ တက်သွားတယ်။ တစ်ဂါလန်ကို ကျပ် ၁၃၂၀ ပိုရသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ယဉ်တွေအတွက် တစ်ရက်ရောင်းချပေးတဲ့ ဓါတ်ဆီပမာဏက ဂါလန် တစ်သန်း ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ တစ်ရက်ကို ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၃၂၀ ပိုရလာတယ်။ တစ်လကို ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၄၅၀ လောက် ရသွားတယ်။ ၀န်ထမ်းလစာတိုးလို့ ပိုပေးရမယ့်ငွေက ဘီလီယံ ၇၂၀ ဆိုတော့ တစ်ဝက်ကျော်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ မလောက်သေးဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာထပ်လုပ်လဲ ဆိုတော့ ဒါအားလုံးသိပြီး သားပဲ မီတာခကို ၂.၅ ကျပ်ကနေ ၂၅ ကျပ်အထိ ဆယ်ဆတင်လိုက်တယ်။ စက်ရုံသုံးတွေက ကျပ် ၅၀ ဖြစ်သွားတယ်။ မီတာခဆိုတာ တစ်ပြည်လုံး ကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းလောက်အောင်ရတဲ့ ပမာဏဆိုတော့ လစာပေးဖို့ ငွေလောက်သွားတယ်။
အဲဒါကို သုံးသပ်ပြီးတော့ အဖြေထုတ်ကြည့်။ ၀န်ထမ်းကို လစာတိုးပေးဖို့ ကုန်ဈေးနှုန်းကို တက်စေရာမှာ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်တဲ့ ဟာကြီးကို ရှစ်ဆကျော်သွားဈေးတင်တယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတည်းဟူသော ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်တအားအရေးပါလွန်းတဲ့ ဟာကိုလည်း ၁၀ ဆ တိုးလိုက်တဲ့အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းကို ကုန်ဈေးနှုန်းကို အဓိက သက်ရောက်စေတဲ့ သော့ချက်ကြီးတွေကိုမှ သွားကိုင်လိုက်တော့ ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်း တကယ်ပဲ တက်သွားခဲ့တယ်။ ပြသနာကြီးဖြစ်လောက်အောင်တက်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ကုန်ဈေးနှုန်းတက်သွားတော့ အခုနက ၀န်ထမ်းတွေကို လစာတိုးပေးတာဟာ အရာမရောက်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီလိုတိုးပေးလိုက်တော့ရော သူတို့စားဝတ်နေရေးကို လောက်စေရဲ့လား။ အဲဒီတုန်းက လစာတိုးရခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဒီကနေ့ရော စားလို့လောက်ရဲ့လား။ ဒါ တကယ့် ဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ မဖြေရှင်းပါနဲ့ “ ဟု သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ခုတ်တီးပြီး အားပေးပါတယ် ရန်ကုန်တိုင်း ဂျာနယ် ခင်ဗျား။
အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ တင်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်း ရန်ကုန်တိုင်းပို့စ်မှာ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် အငြိမ်းစား ဦးမော်သန်း လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ၀ယ်ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်လို့ ညွှန်းဆိုပါရစေ။
၀န်ထမ်းဦးရေက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတာပါ။
အဲဒီ ငါး ရာခိုင်နှုန်းအတွက် ကျန်တဲ့ ပြည်သူလူထုကြီး ရင်ဆိုင်ရမယ့် ကုန်ဈေးနှုန်း တိုက်ပွဲကြီးကိုလည်း တစ်ချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်ပေးကြပါဦး။
ပြင်ပမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးဆိုတာလည်း ထည့်တွက်ကြပါဦး။
၀န်ထမ်းတွေကို ရိက္ခာထပ်ဆောင်းပေးတာတို့ (အရင်တုန်းက ခွဲတမ်းပေးသလိုပေါ့ဗျာ)။
ရိက္ခာစိုတို့ ရိက္ခာခြောက်တို့ ပေးတာမျိုးပေါ့။
တစ်နှစ်တစ်ခါ ဆုကြေးပေးတာမျိုးတို့။ တခြားနည်းလမ်းလေးတွေလည်း ရှာကြည့်ကြပါဦး။
အစိုးရ၀န်ထမ်း မဟုတ်သော ပြည်သူလူထုကလည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေပါ။ သူတို့ကိုလည်း ထည့်တွက်ကြပါဦး။
အစိုးရ၀န်ထမ်းမှ မိသားစုဝင်တွေလို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ….။
ကိုဘလက်ချောရေ ဒီ့ထက်ကောင်းမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာနိုင်ပါစေ လို့ ပြောရမှာပေါ့။
တကယ့်လက်တွေ့ မှာ အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေလဲ ငတ်လို့ ၊မလောက်ငှလို့ ပါ။ဒါဟာ
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထိရောက်စွာ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ် ကိုချီးကျူးရမှာပါ။
ဆောင်းပါးထဲက ဆရာသုံးသပ်သွားသလိုပဲ တိုးပေးရင်းကုန်ဈေးနှုန်းကလည်းတက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ တောကစကားပုံလေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေမှာ ဘာတဲ့
(မွဲပါတယ်ဆိုနေမှ တောင်ဘက်အိမ်ကဖွတ်သားခွဲအုံးမလား)ဆိုပဲ အဲဒီလိုဖြစ်နေမှာသေချာတယ်ဗျ
ကျနော်ကတော့ အစိုးရ၀န်ထမ်းမှမဟုတ်ဘူး တစ်နိုင်ငံလုံးက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက မခွဲခြားပဲ ၀န်ထမ်းတွေအားလုံး ဖူလုံအောင်စီမံကိန်းဆွဲသင့်ပြီထင်တာပဲ
gas၊ကျောက်စိမ်း၊၀န်ထမ်း အခွန်စတဲ့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေ ကို အခွန်တွက်ရင် ဘယ်တော့မှ ၆ ကျပ်နှူန်းပြင်မယ်မသိ
လူကြီးများ၏ တိုက်ပွဲ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဟု ဆုတောင်းယုံမှ တစ်ပါး အခြားမရှိတော့ပါပြီ။ ဆုတောင်းတော့ ပြည့်မည်မထင်ပါ။
အစိုးရနှင့် လွှတ်တော် ထုံးစံ အတိုင်း နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း စတင်ပြီလား …….
ယုံပီးးး ပြည်သူတွေကို ပြန်ပြော….
အမှန်က ဟိုလို..ဟိုလို..တွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာ
ရေတိုနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့လို့ လိုရင်းကိုမရောက်ခဲ့တာ သာဓကတွေ တပုံကြီးပါ..
အစိုးရ ၀န်ထမ်းမဟုတ်သော ပြည်သူလူထုကိုလည်း ထည့်တွက်စဉ်းစားစေချင်တဲ့..
၉၅ ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ အသံကိုလည်း နားထောင်ပေးကြပါ….
ကုန်ဈေးနှူန်းကိစ္စရပ်က ၅၀၀၀ ထောင်တန်ဖုန်းထက် ပိုအရေးပါ ပါတယ်. :exclaim:
သေးပါဘူးဗျာ..အရင်အစိုးရအတိုင်းဘဲ(အေးလေ လူမှမပြောင်းတာ)..ကိစ္စတစ်ခုကို နားလည်တတ်သိပညာရှင်တွေနဲ့ သေသေချာချာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပီးမှအကောင်အထည်ဖေါ်သင့်တာကို စွတ်စွတ်လုပ်နေတာဘဲဗျ…ဒါလုပ်ရင်ဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်မယ်..ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်..
သင့်ပါရဲ့နဲ့ မသိချင်ရောင်ဆောင်နေပြန်တယ်…ခုရွေးကောက်ပွဲနီးတော့ လာပြန်သေးတမျိုး…အနိမ့်ဆုံး
• Green Rose says:
Green Rose က စက်ရုံနာမည် သိရင် ကူညီမလို့ မအားတဲ့ကြားထဲက ၀င်ဝင်ကြည့်နေတာ.. ပထမ post မှာ မေးထားတာ ပြန်လည်းမဖြေဘူး.. ဖြစ်ရပ်မှန်လို့ နာမည် တပ်ထားပြီး.. သတင်းပေးတာက တိလည်း မတိကျဘူးနော်… သူများတွေ ပြန်ဖြေတာတွေကိုချည်းပဲ သိမ်းသိမ်းသွားတယ်။
အာ………ဖြေလို့ရမလားဗျ…..ဖြေချင်တာယားနေတာပဲ…. ရုံးကလူကြီးတွေလည်း ဒီဆိုဒ်ကိုဝင်ဝင်ကြည့်တယ်လေဗျာ …… ဒါကြောင့် Green Rose ရဲ့ မေလ်းလေးဖြစ်ဖြစ်ထားခဲ့ပေးပါလို့ပြောတာပေါ့… ကျွန်တော့်မေလ်3းခုလောက်ကို ရုံးကအကုန်သိလို့ဗျ ……..
Green Rose ရဲ့စေတနာကိုအလေးထားပါတယ်။ဒီPostလေးဟာဘယ်သူကိုမှနစ်နာစေလိုတာမရှိပါဘူး။
1> Is Davit’s reason acceptable? He is writing down ALL by using ” Davit ” because his bosses could not know who is ” Davit “, Right ?
And than WHY did not createanew Email address ?
2> He is asking Email address without showing his email address.Honest ?
3> When GR ask COMPUTER (2times -Post No 1 and No2), Davit answered.
I believed that this is TWINs or clone.Unbelievable.
As for me, I couldn’t believed them ( Computer and Davit ).
ကိုချောကလက်ကြီးရေ …. အလွန်ကောင်းတဲ့ သုံးသပ်တင်ပြချက်လေးကို ဖတ်ခွင့်ရအောင် ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် … ။
လက်တလော ပြသနာကို တစ်ကွက်စာလေးပဲ ကွက်ကြည့်ပြီး ဖြေရှင်းတတ်တာ … လူအများစုရဲ့ .. လုပ်လေ့လုပ်ထအကျင့်လို့ ဆိုမလားပဲ .. (ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုပဲမို့ပါ ) ။
ကြောက်ခဲ တစ်လုံးကို ရေထဲ ပစ်ချဆော့ကစားလိုက်ဖို့ကလွယ်ပေမယ့် … သူ့ရဲ့ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု့ကြောင့် .. နိမ့်ချည်၊မြင့်ချည် …လှုပ်ရှားသွားရမယ့်.. ဗေဒါပင်လေးတွေအတွက်တော့.. အလူးအလဲဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့နော် …. ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရောင်းလို့ရတဲ့ ဒေါ်လာ ၂.၇ ဘီလီယံက တစ်ဒေါ်လာ ခြောက်ကျပ်ဈေးနဲ့ ဆိုရင် ကျပ်ငွေ ၁၃ ဘီလီယံ လောက်ပဲ ရှိတယ်..
ဆိုတော့.. အဆ ၁၀၀မက ကွာနေတဲ့.. ဈေးတွက်နဲ့ကြည့်ရင်.. အဲဒီ အဆ၁၀၀လောက်ကြီးဖြစ်တဲ့.. ကျပ်ငွေတွေဘယ်ရောက်သွားသလည်း မေးချင်တာပါ…။
ဓါတ်ငွေ့ရောင်းချိန်ကစပြီး.. နှစ်တိုင်းဝင်နေတဲ့… ဒေါ်လာတွေမို့.. နှစ်တိုင်း… ဘယ်တွေရောက်နေကြသလည်းဟင်င်င်…
တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတွေ.. ဘာတွေသုံးလို့.. ဘာဖြစ်နေသလည်း.. လူထုကို… အသိပေးဖို့ကောင်းပါတယ်…။
ယူအက်စ်ရဲ့.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်သမ္မတလောင်း.. ဒီဘိတ်မှာ.. ပြီးခဲ့တဲ့တပါတ်က.. သမ္မတလောင်း.. ဂင်းဂရစ်ခ်ျက.. ဓါတ်ဆီတဂါလံ ၂.၅ ဒေါ်လာရအောင်လုပ်ပြမယ်ပြောထည့်လိုက်တယ်.. (အခု.. အယ်လ်အေမှာ တဂါလံ… ၄.၃၀ဒေါ်လာ)
ဖြစ်နိုင်တာ.. မဖြစ်နိုင်တာ..အပထား.. မဲဆွယ်တယ်ပေါ့ဗျာ…
Newt Gingrich’s $2.50 gas promise – Feb. 24, 2012
3 days ago – Gas prices are on the rise, andacadre of politicians are now selling the promise of lower prices at the pump. Newt Gingrich, struggling to ..
ဝန်ထမ်းတွေကို ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ် ခွဲပြီး လစာပေးရမှာဗျ။
အစိုးရဌာနတွေနဲ့ အစိုးရလုပ်ငန်းတွေကို ခွဲထုတ်ပစ်ရမှာ။
အဲဒီလို လုပ်မှ အစိုးရ စားရင်းကနေ လခပေးရတာနည်းသွားပြီး shock impact ကို လျှော့ချနိုင်မှာ။
ငွေအသုံးလည်း နည်းသွားမှာမို့ ဘတ်ဂျက်လိုငွေလည်း နည်းသွားမှာပေါ့။
ကိုလင်းဝေပြောသလို စလုပ်နေပြီ … လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရပ်တည်ပြီး ၀င်ငွေရှာရတဲ့အပြင် ပင်စင်လစာကိုပါ တာဝန်ယူခိုင်းတဲ့စနစ်ကို အခုဘတ်ဂျက်မှာ စတင်ကျင့်သုံးပါတော့မယ် …
လုပ်ငန်းတွေက ၀င်ငွေရှာပြီး ဌာနတွေကို ပံ့ပိုးပေးရမှာမုိ့ လစာတိုးပေးဖို့ဆိုတာ ပင်မအစိုးရဆီမှာ တာဝန်သိပ်ကြီးမှာမဟုတ်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ် …
“ ၀န်ထမ်းဦးရေက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတာပါ။
အဲဒီ ငါး ရာခိုင်နှုန်းအတွက် ကျန်တဲ့ ပြည်သူလူထုကြီး ရင်ဆိုင်ရမယ့် ကုန်ဈေးနှုန်း
တိုက်ပွဲကြီးကိုလည်း တစ်ချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်ပေးကြပါဦး။”
တွေးစရာ တွေ ကိုရစေတဲ့ ဆောင်းပါးကို ရှာဖွေတူးဖေါ်ပေးတဲ့စေတနာကို လေးစားပါတယ်။
ကျွန်တော်ဥာဏ်မှီသလောက်ပြောပြရင် အစိုးရရုံးတော်တော်များများ မှာပိုနေသော မလိုအပ်သော ၀န်ထမ်းတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်..
ရုံးယူနီဖေါင်းကြီးနဲ့တင် ဈေးပါတ်နေသော ရှော့ပင်းထွက်နေသော ၀န်ထမ်းတွေအများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်
ရုံးတစ်ရုံးမှာ အဓိက၀န်ထမ်း ၅ ယောက်လောက်ရှိရင်ရတဲ့ရုံးက ၀န်ထမ်း ၁၅ ယောက်လောက်တွေ့နေရပါတယ်
ဥပမာ…လ ၀ က , မြေစာရင်း စတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာ လူ ၁ ယောက်စာ အိမ်ဂရမ် ၁ ခုစာ ဆိုရင် စာရွက်ထုကြီး အကြီးကြီးနဲ့ ရေးလိုက်ရတဲ့ ဖြည့်လိုက်ရတဲ့ စာတွေ မနည်းဘူး
ဒီနေရာမှာ IT နည်းပညာနဲ့လုပ်ရင် ????
MPT မှာ ဖုံးဘီလ်ကို prepaid စံနစ်နဲ့လုပ်ရင်???
လူ ၁၀ ယောက်စာကို ၁ ယောက်ထဲနဲ့ ပြီးပြတ်နိင်ပါတယ် မြန်လဲမြန်မယ်..
ပိုနေတဲ့လူ ၉ ယောက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီး တကယ် အရည်အချင်းရှိသော ၁ ယောက်ကို ၅ ယောက်စာလခပေးလိုက်တာက ပိုပြီးဖြစ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်
၁ ယောက်ထဲလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ကို ၅ ယောက်လောက်က၀ိုင်းပြီး လုပ်နေတဲ့သဘောပါ
ဒါကြောင့် နည်းစံနစ်တွေပြောင်း..၀န်ထမ်းတွေလျှော့ လစာကိုလုံလောက်အောင်ပေး တကယ်အရည်အချင်းရှိသူကိုသာခန့် မယ်ဆိုရင်???
အစိုးရရုံးဝန်ထမ်းတော်တော်များများ ရူံးအလုပ်ထက် ဦးစီးမူးအလုပ်ကပိုများနေတာတွေ့ရပါတယ်
ဟုတ်တယ် ကိုပွ။ ကျွန်တော်လဲပြောချင်နေတာကြာပြီ။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်ချိန်က ဘယ်အချိန်က နေဘယ်အချိန်ထိလဲ။ လစ်ရင်လစ်သလို့ဒိုးနေကြတာပဲတွေတယ်။ အလုပ်ကို ဖိဖိစိစိ လုပ်တဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းမျိုးဆိုတာတော်တော်ရှားပါတယ်။ ဦးရွှေမန်းကပြောတယ် နေပြည်တော်က ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေတောင် 100000 ကျော်ရတဲ့အတွက် ၀န်ထမ်းတွေလဲ ရသင့်တယ်တဲ့။ ဟိုကလူတွေက အသေလုပ်ရတာ ကိုကြဒီဘဲထဲ့မပြောဘူး။ ဘိလပ်မြေအိတ်ထမ်းတာတောင် ပြေးပြီးထမ်းနေရတဲ့သူတွေလေ။အဲ့လောက်တော့ရရမှာပေါ့။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေများ လစာအပြင် အာရကေကရသေးတယ်လေ။ လစာတိုးပေးရင်လဲ အရေအတွက်သာ များပြီး အရည်အချင်းမရှိသော သူများအား ထုတ်ပစ်ပြီး ကျန်ရှိတဲ့သူတွေကို လဲ အလုပ်များများစေခိုင်းမှ အဆင်ပြေမည်ဟုထင်မိပါတယ်။
လူဦးရေ ၂ သန်းကို ပျှမ်းမျှ တစ်ယောက်ကို သုံးသောင်းတိုးပေး။ တစ်လကို ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ။ ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၆၀ လောက်ဖြစ်သွားမယ်။ တစ်နှစ်ကို ဘီလီယံ ၇၂၀ လောက်လိုမယ်။
တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ယဉ်တွေအတွက် တစ်ရက်ရောင်းချပေးတဲ့ ဓါတ်ဆီပမာဏက ဂါလန် တစ်သန်း ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ တစ်ရက်ကို ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၃၂၀ ပိုရလာတယ်။ တစ်လကို ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၄၅၀ လောက် ရသွားတယ်။ ၀န်ထမ်းလစာတိုးလို့ ပိုပေးရမယ့်ငွေက ဘီလီယံ ၇၂၀ ဆိုတော့ တစ်ဝက်ကျော်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ မလောက်သေးဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာထပ်လုပ်လဲ ဆိုတော့ ဒါအားလုံးသိပြီး သားပဲ မီတာခကို ၂.၅ ကျပ်ကနေ ၂၅ ကျပ်အထိ ဆယ်ဆတင်လိုက်တယ်။ စက်ရုံသုံးတွေက ကျပ် ၅၀ ဖြစ်သွားတယ်။
They are preparing for April 1,2012, BY ELECTION only.
They don’t think about the country especially for the people’s welfare.
Because they are not selected by the people. Am I right?
အဲဒီတော့ တစ်ရက်ကို ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၃၂၀ ပိုရလာတယ်။ တစ်လကို ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ၄၅၀ လောက် ရသွားတယ်။ ၀န်ထမ်းလစာတိုးလို့ ပိုပေးရမယ့်ငွေက ဘီလီယံ ၇၂၀ ဆိုတော့ တစ်ဝက်ကျော်လောက်ပဲ ရှိတယ်။
တလ.. ၁.၃ x ၃၀ = ၃၉ ဘီလီယံ
တနှစ် ၃၉ x ၁၂ = ၄၆၈ ဘီလီယံ
ကြည့်ရတာ.. ဆြာဘလက်ချော.. တိုက်ပိုအယ်ရာထင်ပါတယ်..။
တကယ်တော့.. ၂၀၀၇ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့.. ထောင်ထဲဝင်သွားရတာ.. အဲဒီဓါတ်ဆီဈေးတင်လို့ပဲ..
ပြဿနာတစ်ခုကို ရေရှည်မတွေးဘဲလက်ပူတိုက်ပြီး ပြေလည်အောင်ဖြစ်သလိုဖြေရှင်းတဲ့
ကျနော်တို့ဆီမှာ ဒုက္ခပေးနေတာ ဒီအကျင့်ဆိုးပါ.
ဒီစကားလေးကြောင့် အဆင်ပြေနေတဲ့ အပြင်ဝန်ထမ်းတွေလည်း လစာတိုးနိုးမျှော်နေကြပါပြီ။
ကုန်ဈေးနှုန်းများတက်သည်ရှိသော် သူတို့တွေရနေတဲ့ လခကလည်း ဘယ်လောက်တော့မလဲ။
အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ ၀င်ငွေမတိုးပဲ(အလုပ်အကိုင်မကောင်း၊ရေခွန် ၊အမှိုက်ခွန်၊မီတာ၊လမ်းတံတားကြေး၊အခွန်တွေက အစစတက်တာမို့ ) မကိုက်လို့ ၀န်ထမ်းအင်အားလျှော့ရင် အလုပ်လက်မဲ့တွေ တိုးလာအုံးမယ်။
လစာတိုးရင် ကုန်ဈေးနှုန်းတက်တာ ကုန်သည်တွေ အမြတ်ကြီးစားလို့ချည်းပဲ တစ်သက်လုံးမှတ်လာကြတာ။
“ကုန်ဈေးနှုန်းကို အဓိက သက်ရောက်စေတဲ့ သော့ချက်ကြီးတွေကိုမှ သွားကိုင်လိုက်တော့ ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်း တကယ်ပဲ တက်သွားခဲ့တယ်။ ”
ယူအက်စ်မှာ.. ရေနံက.. ကုန်ဈေးနှုန်းတင်မက..လည်ပါတ်ငွေ ငွေအားလုံးရဲ့.. သော့ချက်လည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်..။
မြန်မာပြည် အစိုးရ က ထိုင်ခုံ ပေါ်မှာ ထိုင်တာ မဟုတ်ဘူး ဗျိုး။ ;-)
ဒီရက် အလုပ်မှာ ရေစီး နည်းနည်းကြမ်း နေလို့ အိမ်ရောက်ရင် ခေါင်းက သိပ်အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး။
ရွာကိုတော့ သတိရလွန်းလို့ ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ကဘချော ရဲ့ ဒီ Post မှာလဲ ထုံးစံ အတိုင်း ဆွဲငင်အားများစွာပါပါတယ်။
ကျွန်မ လဲ ဦးလှမောင် ရဲ့ သဘော နဲ့ ထပ်တူပါဘဲ။
ဆရာဦးမော်သန်း ဘာဝင်ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလဲ စိတ်ဝင်စားပါရဲ့။
လစာတိုးလိုက် တာနဲ့ ကုန်ဈေးနှုံးတွေက လိုက်တိုးမှာ အသေအချာပါဘဲ။
ဘယ်သူ ဘာကြေး လောင်းမလဲ။
ညွန်မှုး နဲ့ဗိုလ်မှုးကြီးတွေ အထက် အရာရှိကြီး တွေ ကို အလျံပယ်အခွင့်အရေး ပေးထားတာတွေကို
လျော့ပေးပြီး ၀န်ထမ်းငယ် တွေကို လစာတိုးပေးလိုက်ရင်တောင် လောက်မယ် ထင်ပါ့။ တစ်ကယ်တမ်း
လာတ်စားနေသူတွေက ၀န်ထမ်းကြီးတွေပါ ၀န်ထမ်းငယ် လေးတွေက သဒ္ဒါကြေး တန်စိုးလက်ဆောင်ပါ
တစ်နေ့စာ တစ်နေ့ ရှာရတာကြလဲ ဖတ်ဖတ်မောပါ ၀န်ထမ်းကြီးတွေကတော့ တစ်နှစ်စာ နှစ်နှစ်စာ
တစ်သက်စာလောက်ဆိုရမလို ခွင်ဝင်ပြီဆိုရင် လာထား အားလဲနာမနေတော့။ ဟုတ်ပြီ လာတ်ရပြီးရင်လဲ
ကျေးဇူးစကားတောင် ပြောဖေါ်မရကြကြပါဘူး။ သူ့ကိုယ်သူ သူကဘဲ သနားလို့ မ. ပေးလိုက်တဲ့ပုံမျိုးနဲ့
အမှန်ပြောရင် kokothandar လဲ လာတ်ထိုးရင်း အကျိုးခံစားမှု့ ရဘူးသူပါ လာတ်ယူသူကလဲ ၀န်ကြီး
ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦးပါ တစ်ဆင့်ခံက တောင်းလို့ပေးခဲ့ရခြင်းပါ သဒ္ဒါလို့တော့မဟုတ်ပါ
Eleven Media Group Link မှ လူထု ဦးစိန်ဝင်းရေးသားထားမှုအား ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။
သူရဦးရွှေမန်းက အဆိုတင်သွင်းရာမှာ ”ယနေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းရဲ့ လက်ရှိရရှိနေသော လုပ်ခ၊ လစာစရိတ်နှင့် ချီးမြှင့်ငွေများမှာ ယနေ့ခေတ်ကာလနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှု မရှိပါ။ အဲဒါကြောင့် ယနေ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ခ လစာစရိတ်နှင့် ချီးမြှင့်ငွေများအား ထိုက်သင့်သလို အလျင်အမြန် တိုးပေးရန်လိုသည်ဆိုတဲ့အချက်ကို ထောက်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မှာဖြစ်သလို အူမတောင့်ပြီး သီလမစောင့်ရင်တော့ သူ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပြီး သူတို့တရားကို သူတို့စီရင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီအဆိုကို အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဦးလှထွန်းက ပြန်လည်ဖြေကြားရာမှာ ဘဏ္ဍာရေးရှုထောင့်အမျိုးမျိုးက ရှုမြင်တွက်ချက်ပြီး အဆိုတင်သွင်းသလို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘဲ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာမှ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အကျယ်တ၀င့် ရှင်းလင်းပြောကြားသွားတယ်။
ဒါပေမယ့် ၀န်ကြီးဦးလှထွန်းက လစာတိုးပေးလိုက်ရင်တိုးလာမယ့် ကုန်ကျစရိတ်တွေကို သေသေချာချာ တွက်ပြပြီး၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောလိုက်တော့ အမြင့်ဆုံးရောက်သွားတဲ့ စိတ် ဓာတ်တွေ အောက်ဆုံးထိအောင် ”ဖုတ် ကနဲ” ပြုတ်ကျသွားတော့တယ်။ လက်လှမ်းမီရာ သတင်းမီဒီယာသမားတွေဆီ လှမ်းပြီ ကူကြပါဦး၊ ကယ်ကြပါဦး၊ ရေးပေးကြပါဦးနဲ့ ပူဆာကြတယ်။ ဒီတော့လည်း တာဝန်ကျေဖို့ မကြိုးစားဘဲ နေလို့မဖြစ်တော့ဘဲ ရေးရ ပြောရတော့တယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတွက်ချက်ပြတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ သိပ်ပြီး မြင့်တက်လာမယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုလည်း မလွှဲမရှောင်သာ ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဝန်ကြီးက ကုန်ကျမယ့်ဘက် တစ်ခုကိုပဲ ပြောသွားပြီး ရလာဖို့ရှိတဲ့ ဘက်တွေကိုတော့ ပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။
ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရနိုင်ရင် ဘယ်လုပ်ငန်းမှ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် အခုလိုဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုကနေ တခြားဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုကို ခုန်ပြီး ကူးပြောင်းတဲ့ အပြောင်းအလဲမျိုးမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ အခရာအကျဆုံးဖြစ်တယ် …
နောက် ပြည်မြန်မာ ဂျာနယ်မှာလည်း တော်ဝင်ဆောက်လုပ်ရေးမှ ဦးကိုကိုထွေး၊ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် ဥက္ကဌ ဒေါက်တာစိန်မောင် ၊ မက်စ်မြန်မာ ဦးဇော်ဇော်၊ ငါးလုပ်ငန်းမှ အတွင်းရေးမှုး ဦးဝင်းကြိုင်တို့က လည်း လစာတိုးရေး ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါသည် ။
အဲ.. အပြောကတော့ ရွှေမန်းဆိုတာလေးပြန်ခေတ်စားလာတော့မယ်ထင်ပါ့။ ဦးရွှေမန်းက
“လစာတိုးရင် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မယ်။ ကုန်ဈေးနုန်းမြင့်မှာစိုးလို့ လစာ မတိုးဘဲနေလို့ရမလား။ လစာတိုးပေမယ့် ကုန်ဈေးနုန်းမမြင့်အောင် ဘာလုပ်မလဲ။ ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ် ။ လစာတိုးတိုး မတိုးတိုး မဖြစ်သင့်တဲ့ ကုန်ဈေးနုန်းဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့လိုတယ်။”
ဒါဖြင့်ရင် ကုန်ဈေးနုန်းမတိုးအောင် ဘယ်လိုကြိုတင်စီမံချက်များရှိမလဲ ဆိုတာတော့ နောက် စာမျက်နှာ တစ်ခုမှာ ဒီလိုဖတ်လိုက်ရပါတယ် ။
” လစာတိုးပါက ကုန်ဈေးနုန်းများ မြင့်တက်လာနိုင်သည်ကို လည်း ဖြေရှင်းရန် စဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ”
ဆိုတော့ ဘာ ကြိုတင် စီမံမှု့ မှ မရှိဘဲ ပေးပေးဆို တောင်းဆိုနေတာဟာ သူဘဲရတဲ့ ဦးသူရရွှေမန်းကြီး ရွှေမန်းသဘင်ဇာတ်ကနေတာ၊ ကလေးကစားနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သတ်ိမှထားမိရဲ့လားလို့ ……………
အခွန်စနစ်ကို ပြင်နိုင်ရင် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ တဝက်လောက်ကို အသာလေးဖြည့်ပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်..။
ကွန်းမန့်တွေ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကျွန်တော် တိုက်ပို အမှားလို့တော့ မထင်ပါဘူး။
သို့သော် ပြန်စစ်ဖို့ အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပါဗျာ။
ဆရာဦးမော်သန်း ဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာ ကွန်းမန့်က တစ်ဆင့်ရေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။
Basic salary ပေါ်ကတွက်ရင်..24.25% ပါဗျား…
အမှန်ဘဲကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ…I agree with you.
You are welcome, Brother.( Ko Kyee Mite )
Please give me time to discuss with you in Myanmar font.
May beafew days only. OK?
It is sure, I will.
ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ..။
ဒီပိုစ့်ကို မနေ့က ကတည်းက ကွန်မင့်ရေးဘို့ကြိုးစားတာ အဆင်မပြေပါဘူး။
အခုတတိယအကြိမ်မှာ submit လုပ်လို့ရလဲ တော်တော်နောက်ကျနေပါပြီ။
ပြောချင်တာတွေလဲ ရှေ့မှာ တော်တော်ပြောသွားနှင့်ကြပါပြီ..။
ဒီတော့ မတူတဲ့ အမြင်လေးနဲနဲ ချပြပါရစေ…..။
၀န်ထမ်းလစာတွေ တိုးဖို့ပြောဆိုကြရာမှာ ဘာအတွက်ပါလဲ ?
၁- ၀န်ထမ်းတွေ လက်ရှိလစာနဲ့ စားဝတ်နေရေးမဖူလုံလို့
၂- ၀န်ထမ်းတွေ စားဝတ်နေရေးဖူလုံအောင်ပေးခြင်းဖြင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖေါ်ဘို့ … လို့ပါပဲ။
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ- ၀န်ထမ်းတွေသာမက မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ အများစု စားဝတ်နေရေးမဖူလုံပါဘူး။
စားဝတ်နေရေးမဖူလုံတဲ့ပြဿနာဟာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ သီးသန့်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ တနိုင်ငံလုံးရဲ့ပြဿနာပါ။
မဖူလုံတာချင်းတူရင်တော့ အများစုကိုပြောရရင်- ၀န်ထမ်းတွေက အခြား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေထက် ပိုပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ် နေနိုင်ကြပါသေးတယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုတာ အခြားဆင်းရဲသားအများစုထက် ပိုပြီး ပညာတတ်တယ်။ ပိုပြီး အမြင်ကျယ်တယ်။ ပိုပြီး အတွေးအခေါ်ရှိတယ်။ ပိုပြီးမိမိဘ၀ မိမိဝင်ငွေကို စီမံတတ်တယ်။ ပိုပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းတတ်တယ်။
ဒါကြောင့် စားဝတ်နေရေးမဖူလုံတဲ့ ပြည်သူများစွာကြားမှ ၀န်ထမ်းတွေအတွက်ပဲ သီးသန့်ရွေးပြီး ကွက်ပြီး အပြေးတပိုင်းဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ သူတွေဘယ်လိုမြင်ပြီး ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်မလဲဆိုတာလေးလဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာပါ။
တကယ်တော့ ကျောကသားလဲသား ရင်ကသားလဲသားမို့
တနိုင်ငံလုံးရဲ့ပြဿနာ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ပြဿနာကို တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ စဉ်းစားတွက်ချက်ဖြေရှင်းခြင်းကသာ ပိုပြီး ကြောင်းကျိုးဆီလျှော်ပါတယ်။
၂- ၀န်ထမ်းတွေ စားဝတ်နေရေးဖူလုံအောင်ပေးခြင်းဖြင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖေါ်ဘို့ ….. ဆိုရင် – အဲဒီအတွက် အသင့် စီစဉ်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်။
၀န်ထမ်းတွေလစာတိုးပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စကို အင်တိုက်အားတိုက် ပြတ်ပြတ်သားသား တိုက်ဖျက်ဖြေရှင်းဘို့ လက်တွေ့စီစဉ်ထားပြီးပါပြီလား ?
ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြင့် အဲဒီစာမေးပွဲကို အောင်မှတ်ရအောင်ဖြေနိုင်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်မျိုး တော်တော်နည်းပါသေးတယ်။
လစာတိုး > ကုန်ဈေးနှုံးတက် > ငွေတန်ဘိုးကျ > လာဘ်ငွေပိုတောင်း (ပေါက်ဈေးပိုမြင့်) မဖြစ်လာဘူးလို့ ဘယ်သူများအာမခံမလဲ။
ကျုပ်ကိုယ်တွေ့ကတော့ အရင်လစာတိုးတဲ့အခေါက်(၂၀၀၅ လို့ထင်တယ်) အပြီးမှာ လာဘ်ပေးရတဲ့ပမာဏ နှစ်ဆမက တိုးသွားတာပဲ။
တကယ်တော့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စမှာ အဆိုးဆုံးနဲ့ ပမာဏအများဆုံး ပြည်သူကိုအထိခိုက်ဆုံး တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို သက်ရောက်မှု့အရှိဆုံးလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု့တွေဟာ အောက်ခြေ (လစာတိုးမှ စားဝတ်နေရေးဖူလုံမယ့်) ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ မပတ်သက်ပါဘူးနော။ လက်တွေ့လေ့လာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ကိစ္စသေးသေးတွေမှာသာ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းက မဖြစ်စလောက်မုန့်ဘိုးရတာပါ။ အလတ်စား၊ အကြီးစားနဲ့ စူပါအကြီးစားကိစ္စတွေမှာ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းက တပြားမှမရပဲ ခိုင်းသလိုလုပ်ပေးရတာတွေ အများဆုံးပါနော။
၀န်ထမ်းတွေကိုလဲ အားရှိစေ။ ဆွပြီးသားမို့ ကျေနပ်စေ။ အစိုးရလဲနာမည်ကောင်းလေး ရစေဘို့ဆိုရင်
ဖုတ်ပူမီးတိုက် အနေနဲ့တော့ သင့်တော်တဲ့အချိုးအစား (ဥပမာ ၂၀%) တိုးပေးသင့်ပါတယ်။
(အခြားပြည်သူများနဲ့အတူတကွ) အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ စားဝတ်နေရေးဖူလုံဘို့
တဆင့်တက်ပြီး မိမိအရည်အချင်းနဲ့ ဆီလျှော်တဲ့ လူမှု့အဆင့်အတန်းရရှိဘို့
ဆိုတာတွေကတော့ အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီး ဟန်ချက်ညီညီ စည်းချက်ကျကျ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင် အကောင်အထည်ဖေါ်ရမယ့် ကိစ္စတွေသာဖြစ်ပါတယ် ….လို့
အေးအတူ ပူအမျှ ခံစားစံစားကြရမှာပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး စိတ်ကြိုက်ပြောရရင် အပေါ်ကကွန်မင့်ထက် ဆယ်ဆမကရှည်သွားနိုင်တာမို့
ကျွန်တော့် တိုက်ပို မမှားဘူးခင်ဗျ။
တစ်နှစ်စာ ဘတ်ဂျက်ကို သူကပြောနေတော့လေ။
သူကြီးတွက်ပေးသလို ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ သူဆွေးနွေးထားတာ အကုန်မှန်ပါတယ်။
အဲဒီ တစ်လ ဘီလီယံ ၄၅၀ နေရာမှာ တစ်နှစ် ဘီလီယံ ၄၅၀ လို့ သဘောထားပေးကြပါဗျာ။
ဂျာနယ်ထဲပါတာလည်း ဒီအတိုင်းပါထားတာ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပို့စ်ထဲမှာတော့ မပြင်တော့ပါဘူး။
၀ိုင်းဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီနေ့ သမ္မတကြီး ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ
ကျွန်တော်ပြောထားသလို ပြည်သူတွေအပေါ် စာနာစိတ်လေး ၀င်သွားဟန်တူတဲ့
၀န်ထမ်းလစာကိစ္စလေး ပါလာတော့ ကျေနပ်ရပါတယ်။
သမ္မတကြီးပြောသွားတဲ့ ၀န်ထမ်းလစာကိစ္စကိုလည်း ထုတ်နှုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေလစာတိုးဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးလို့ ပြန်လည်ချေပသွားပါတယ်။ လူဦးရေ ရဲ့ ၃.၃% သာရှိတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို လစာတိုးပေးရင် ကျန်ရှိသော ၅၈သန်းကျော် လူဦးရေအများစုကြီးကို ထိခိုက်မှာမို့လို့ ဆိုပါတယ်။
အစ်မမခင်လတ် အတွက် ဆရာဦးမော်သန်း ဆွေးနွေးထားတာလေး
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အငြိမ်းစား ပါမောက္ခချုပ် ဦးမော်သန်း က “လစာတိုးပေးလိုက်ရင်ကတော့ Economic Active ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရ ဘဏ္ဌာရေးအင်အားမလုံလောက်တဲ့ အချိန်မှာ နည်းသုံးနည်းထဲက ဘယ်နည်းပဲ သုံးသုံး ၀န်ကပိုပိုပဲ ပိလာမှာပဲ။ ချေးရင်လည်း အတိုးက တက်လာမှာပဲ။ ရိုက်ရင်လည်း Budget Deficit ကများလာတော့ ရေရှည်မှာ တိုင်းပြည်ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။ ငွေစက္ကူရိုက်တာကတော့ အဆိုးရွားဆုံးပဲ။ လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့ အနေအထားက အစိုးရရဲ့ ရငွေနဲ့ သုံးငွေက မျှဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ငွေကြေးဖေါင်းပွမှု ဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ Deficit အများကြီး ပိုလာမယ့် ကိစ္စတွေဆိုရင် အများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတောင် အစိုးရရဲ့ အသုံးစရိတ် ရာခိုင်နှုန်း ၅၀၊ ၆၀ လောက်က ၀န်ထမ်းလစာဖြစ်နေတယ်။ တချို့ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ အသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကနေ ၈၀ က ၀န်ထမ်းလစာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို ဘဏ္ဌာငွေ အပိုမရှိပဲ လစာထပ်တိုးလိုက်ရင် တိုင်းပြည်က Deficit အရမ်းမြင့်သွားမယ်” ဟု ပြောကြားသည်။